Ugbu a, a ụbọchị, e nwere echiche nke mebere DVD inyefe kama nke ezigbo DVD. Virtual DVD a na-akpọ 'Disk Image'. N'ezie, site na-eme a mebere disk, ị na-aghọ aghụghọ na kọmputa, ọ bụghị na a rụrụ arụ uche, ma n'ihi na n'ozuzu ojiji. Ihe 'Virtual DVD Software' na-eme n'ezie, bụ, ọ na-emepụta ihe mmezi mebere Disk mbanye. The software na-ahụ na-eji ndeputa nke ọ bụla disk na usoro dị '.iso' na-emepụta ihe oyiyi nke disk na mounts ya ndị mebere disk mbanye. Ya mere, ndị na kọmputa na-eche na i n'ezie plugged na a disk mbanye na banyere a DVD na ya. Anyị nwere ọtụtụ Disk Image ngwaọrụ n'ihi nzube a nke bụ Mmụọ Ọjọọ ngwaọrụ, Mmanya 120%, Virtual mmepụta oyiri mbanye, Ime Anwansi ISO na Ike ISO.
1. Mmụọ Ọjọọ ngwaọrụ
Mmụọ ọjọọ na-eji ngwá ọrụ n'ụwa nile, ruru ya ndakọrịta na mfe iji ọrụ interface. Ya zuru version aha bụ 'daemon Ngwaọrụ Ultra 2'. Ọ na-eme mebere oyiyi nke CD, DVD na Blu-ray Discs. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke formats, nke na-agụnye .mdx, .mds, .mdf, .iso, .b5t, .b6t, .bwt, .ccd, .cdi, .bin, .cue, .ape, .cue ,. FLAC, .cue, .nrg, na .isz. Ị nwere ike ịmepụta na ugwu-agụ / dee Virtual diski ike oyiyi na ike ma ọ bụ ofu size, Dee bootable oyiyi na-USB ngwaọrụ ole na ole clicks, Mepụta na ugwu mebere Ram disks na-eji a ngọngọ nke ebe nchekwa, Mekọrịta Ram disk na VHD iji ya mgbe reboot, Jiri "Quick Ugwu" nhọrọ efego na-eji ruo 32 diski oyiyi ozugbo (Free version-ahapụ gị ruo 4 diski oyiyi).
2. Mmanya 120%
E wezụga disk Onyonyo, mmanya 120% bụkwa bara uru n'ihi na-ere ọkụ ọ bụla CD na DVD. Ha ọkụ software na-agụnye a Nga Mastering ọrụ nke na-ahapụ gị ọkụ faịlụ kpọmkwem site draịvụ ike gị, ma na-akwado Blu-ray Ọkpụkpọ na HD DVD. Ọ bụ dakọtara na niile Windows 32 na 64 bit sistem ruo Windows 8 na Windows 8.1. Na-akwado formats bụ: .mds, .iso, .bwt, .b5t, .b6t, .ccd, .isz, .cue, .cdi, .pdi na .nrg formats.
3. Virtual mmepụta oyiri mbanye
Nke a bụ otu onye dị mfe na-ewu ewu Disk Imaging ngwá ọrụ. Otu nke kasị mma ihe a na software bụ na ọ bụ maka free. Ọ bụ ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla nke mebere DVD ọkụ ngwá ọrụ n'ihi na ya interface dị mfe ma ya download size bụ nnọọ 1,56 megabytes. Ma na nta size, ọ na-ebelata ịrụ ọrụ ụfọdụ nke na-agụnye ọnụ ọgụgụ dị nta nke na-akwado formats dị otú ahụ na ISO, biini, CCD ma na-eme naanị otu ihe ie kere eke nke mebere DVD. E nwere otu ihe, kama ya obere size, ọ na-akwado ruo 8 mebere ike draịva. Ya mere ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ka a DVD image n'oge na-adịghị, mgbe ahụ, ọ / ọ ga-aga n'ihi na nke a software.
Nke a bụ ọzọ, nnọọ ewu ewu diski Onyonyo ngwá ọrụ nke na-eji na-eke / edezi / adịrị CD ma ọ bụ DVD oyiyi faịlụ. Ọ bụ nnọọ kemfe ngwá ọrụ na-akwado ndị niile mara CD image ụdị, nwere ikike kpọmkwem tinye / ihichapụ / nyegharịa faịlụ ma ọ bụ nchekwa na CD oyiyi faịlụ (s) na Magic ISO. The akụkụ kasị mma bụ na Magic ISO nwere ike ijikwa ruo 10GB faịlụ. Ị nwere ike ịchọta ọ bụla arụmọrụ metụtara disk Onyonyo nke ị nwere ike na-eche nke, gụnyere ihe e kere eke nke bootable CD / DVD oyiyi.
5. Ike ISO
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị nwere Ike ISO disk Onyonyo ngwá ọrụ. Ọ na-akwado niile CD / DVD / BD-ROM Image faịlụ formats gụnyere DAA nke bụ onye dị elu usoro maka oyiyi faịlụ, nke na-akwado ụfọdụ elu atụmatụ na-agụnye, paswọọdụ nchebe, mkpakọ na kewara ka otutu mpịakọta. Na ike na ike mebere DVD mbanye, ngwá ọrụ a nwekwara ike ọkụ ISO faịlụ ka CD, DVD na Blu-ray. Ike ISO bụkwa a nnọọ powerfull mebere DVD mbanye e kere eke ngwá ọrụ na kemfe otu.
3GP DVD: Olee Ọkụ 3GP ka DVD na Mac / Windows
> Resource> DVD> Top 5 Virtual DVD Alternatives